Iindaba -Iimfuno zomgangatho kunye neempawu zebhariki yeplastiki
Izinto ezenziwe ngombhobho weplastiki ubukhulu becala zenziwe nge-polyethylene, ipholiyesta kunye nezinye iiplastiki, kwaye ubukhulu becala zisetyenziselwa ukubamba i-acetic acid, i-tert butyl peroxide, i-petroleum iimpahla eziyingozi, i-asidi kunye neziyobisi ezinobungozi ze-alkali, njl. ethe-ethe, hayi umhlwa, ubunzima ukukhanya, kunye neoli elungileyo kunye nokumelana. Iplastiki inokwahlulwa ibe yi-thermosetting kunye ne-thermoplasticity, eyokuqala ayinakusetyenziswa kwakhona, eyokugqibela inokuveliswa kwakhona.
Imiphanda yeplastiki isetyenziselwa ukupakisha iimpahla ezinobungozi, ezingabuthathaka, ezinomhlwa, ezinganyangekiyo ne-oyile, ezinokumelana nomhlwa, zokugcina ubushushu kunye nobungqina bokufuma. Isetyenziselwa ukubamba iimpahla ezinobungozi ezinje nge-glacial acetic acid, i-tert butyl peroxide, i-petroleum, njl., Kunye neziyobisi ezine-acid-base corrosiveness.
Iplastiki emele ukusonga ingqokelela, ukugcinwa, ukuthuthwa, ingqokelela, ukunkonkxa, yonke le nkqubo igcina kakhulu indawo kunye nedatha. Ubunzima Light, ukumelana ezibandayo, nokumelana, ukunciphisa ungcoliseko, super ecocekileyo, ukuhlangabezana neemfuno zovavanyo zonyango.
Isizathu sokuba umphanda weplastiki ungabi buthathaka kukuba unale mpawu zilandelayo:
1. Yisiqulatho esineemolekyuli eziphezulu
2. Inokubakho ngeendlela ezininzi, ezinjengamanzi, okuqinileyo, isisombululo se-colloidal, njl
3. Ingathatha imilo
4. Oludidi luyinkimbinkimbi, ngenxa yokwakheka kwe-monomer eyahlukeneyo, ke ukwenziwa kweeplastiki ezahlukeneyo
5. Uluhlu olubanzi lokusetyenziswa kunye neemveliso ezahlukeneyo
6. Ineempawu ezahlukeneyo
Inokulungiswa ngeendlela ezahlukeneyo
Umgqomo weplastiki othambileyo uhle, ubunzima obukhanyayo, amandla amnandi, ukunganyangeki kwento, ukumelana nomhlwa, ukugoqeka, ukungabi netyhefu kunye nokungabi nasongo, kwaye kulula ukuhambisa. Itreyi yokubumba umphanda weplastikhi umhle, ugudile ngaphakathi nangaphandle, ungenamthungo ngaphandle kwentsimbi, ubunzima bokukhanya, amandla alungileyo, ukumelana nefuthe, umhlwa, ukungabinetyhefu kunye nokungabi nasongo, ukuthuthwa okufanelekileyo. Umgqomo wemichiza ubukhulu becala wenziwe ngeplastikhi, ekwabizwa ngokuba yiplastikhi yeekhemikhali kunye nomgqomo weplastiki. Iphuhliswa yifomula yesayensi kwaye yaqhushumba. Inemibala eyahlukeneyo, inkangeleko entle, kwaye ifezekisa isalathiso sokupakisha kwi-asidi kunye nokumelana nealkali, ukumelana nokubola, ukuthintela ukuvuza, ukukhawuleza kombala kunye nokushiyeka. Kukhethwe ngokufanelekileyo ukuthutha umgama omde kwezinto zokupakisha iimveliso zeekhemikhali. Imveliso ilungele zonke iintlobo zokutya okungamanzi anetyiwa, izinongo, iimveliso zokhathalelo lwempilo, iwayini kunye neemveliso zekhemikhali ezintle;
Iimpawu Product: ukumelana acid, ukumelana kwealkali, ukumelana lobushushu eliphezulu, non-ityhefu, engenazintsholongwane (intsingiselo: akukho iintsholongwane eziphilayo), nencasa, kwaye scalability ezibalaseleyo kunye nokumelana nempembelelo;
Izinto eziluncedo zeemveliso: ukusonga, ukustaka, ukugcinwa kunye nokuthuthwa, ukufumba kunye nokunkonkxa, okusindisa kakhulu indawo kunye nezinto ezikwinkqubo yonke. Ubunzima Light, ukumelana abandayo, nokumelana, ukunciphisa ungcoliseko, super ecocekileyo, ukuhlangabezana neemfuno zovavanyo zonyango (ukuhlolwa kunye nokuvavanywa);